यी हुन् को’रोना भाइ’रसवि’रुद्ध खोप आविष्कार गर्न, २ घन्टामात्र सुतेर, अनुसन्धानमा रातदिन जुटेकी डाक्टर [ सम्मानको लागी शेयर गरौँ ] – Voice Samachar
गरिब, असहाय र बेसहाराको सहारा बन्दै डा. गोविन्द केसी
महिनाको दोस्रो दिन सुनको मुल्य बढ्यो
संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमको अनलिमिटेड अफर
कोरानाका कारण नेपालमै रोकिएका नेपाली अब साउदी फर्कन पाउने
किर्तिपुरमा घरबेटीले श्रीमान् मा रे पछि परिवारको यस्तो बिचल्ली , ३ छोरा र श्रीमती भोकै , अब के गर्ने भन्ने कुरा मैले सोच्नै सकेको छैन भन्दै श्रीमती यसरी रुदै (भिडियोसहित)
बिदामा बसेका नेपाली कामदार साउदी फर्कन सक्ने
नेपालले खरिद गरेका दुई रेल आज आउँदै
आज केहीस्थानमा ठूलो पानी पर्न सक्ने, सतर्कता अपनाउन सुझाव
मुख्य पृष्ठ /News/यी हुन् को’रोना भाइ’रसवि’रुद्ध खोप आविष्कार गर्न, २ घन्टामात्र सुतेर, अनुसन्धानमा रातदिन जुटेकी डाक्टर [ सम्मानको लागी शेयर गरौँ ]
यी हुन् को’रोना भाइ’रसवि’रुद्ध खोप आविष्कार गर्न, २ घन्टामात्र सुतेर, अनुसन्धानमा रातदिन जुटेकी डाक्टर [ सम्मानको लागी शेयर गरौँ ]
4,616 1 minute read
एजेन्सी। एक महिला वैज्ञानिक घा’तक को’रोना भाइरसविरु’द्धको खोप आविष्कार गर्ने अनुसन्धानमा जुटेकी छिन् । स्कटल्याण्डकी वैज्ञानिक डा. केट ब्रोडरिक कोरोना भा’इरसबाट बचाउन खोप आविष्कार गर्न कोसिस गरिरहेको एजेन्सीले जनाएको छ । द टाइम्सको रिपोर्टअनुसार हिजोआज ब्रोडरिक दिनरात यही काममा व्यस्त हुन थालेकी छिन्। उनी रातमा २ घन्टामात्र सुत्ने गरेकी छिन् । ब्रोडरिक करिब २० वर्षदेखि ख’तरनाक रोगविरु’द्धको खोप बनाउने काममा संलग्न हुँदै आएकी छिन् ।
यसअघि उनी इबोला, जीका जस्ता भ’यानक रोगवि’रुद्ध औषधि बनाउन सफल भएकी थिइन् । अहिले उनी फेरि कोरोना भा’इरसवि’रुद्धको खोप बनाउन लागिपरेकी हुन्।उनले खोप तयार गरिसकेकी छिन् ।
मुसा र सुँगुरमा खोपको परीक्षण भइसकेको छ। उनले भनेकी छिन,’ आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा परिवर्तन ल्याउन काम गरिरहेकी छु र अहिले को’रोना भाइ’रसबाट बच्न खोप बनाउँदैछु
डा.ब्रोडरिक अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा काम गर्छिन् । अनुसन्धानका लागि उनको एउटा टोली छ।उनले भनेकी छिन्, ‘रातमा २ घन्टा मात्र सुत्ने गरेका छौं । दुई सन्तानकी आमा ब्रोडरिकले बिदा मनाइरहेका बेला चीनको वुहानमा को’रोना भा’इरस फैलिएको जानकारी पाएकी थिइन् ।
चिनियाँ अधिकारीले को’रोना भा’इरसको आनुवंशिक कोड जारी गर्ने वित्तिकै उनले ३ घन्टाभित्र खोप तयार पारेको बताएकी छिन् । उनका अनुसार खोप डिजाइन गरेको भोलिपल्ट तयारीका लागि कारखानामा पठाइएको थियो ।
डा.ब्रोडरिकको टोलीले बिल गेट्सद्वारा समर्थित संस्थाबाट रकम पनि पाएको थियो।
काकडभिट्टामा थप १२ जना सशस्त्र प्रहरीमा देखियो कोरोना, ड्युटीमा खटिएका प्रहरीहरुलाई उच्च सावधानी अपनाउन निर्देशन
एकै परिवारमा आठ जना संक्रमितः अस्पतालको बेडबाट चेतमान भन्छन्, ‘लकडाउनको पालना गर्नुहोस’
माधव नेपालको कडा प्रहार : स्थानीय तह लुट्न व्यस्त छन्
एम्बुलेन्स भाडा २ हजार तिर्न नसक्दा ३२ वर्षीया महिलाको मृत्यु